Nezvedu | Taizhou Huangyan Longxin Mould Co., Ltd.
Longxin chakuvhuvhu yakavambwa muna 2019, uye kambani yekutanga yakavambwa muna 2006, Isu takazvipira kune dhizaini uye kugadzira kwepombi fittings muforoma kweanopfuura makore gumi nemashanu.Zvigadzirwa zvedu zvikuru iCPVC pombi inokodzera mafomu, UPVC pombi mafomu, PVC flaring pombi anoumba, PPR mutopota wakakodzera anoumba.
Isu tine ruzivo rwakakosha mukugadzirwa kwetsika epurasitiki fittings muforoma. Kusanganisira seweruwani uye abudise system, yekumwa mvura yekuwanikidza, padenga rekudonha system, kusanganisira PVC / CPVC / PPR / PP / HDPE / etc.
Mumakore gumi apfuura, Longxin muforoma chave vakazvipira pakutsvakurudza uye kukura nenyere zvakakodzera muforoma michina, kuomerera vanhu vaifarira pfungwa uye kugadzira michina, iyo yave kuva nevakawanda pasi rose, uye ticharamba kutsvagisa nekusimudzira kusangana nezvinodiwa nevatengi vedu vatsva nevakuru.
Zvinoenderana nebasa repombi yakakodzera, tinogona kukamura pombi yekukodzera muforoma mumhando dzinotevera
1.Mold yePVC pombi fittings (yekukwira uye yakaderera kumanikidza kureva kupihwa kwemvura uye drainage)
1) CPVC pombi inokodzera muforoma yekumanikidza nzvimbo
2) UPVC pombi muforoma yemadhiraini
3) PVC flaring pombi muforoma (yakakosha kudhonza system yekuwanisa mvura)
4) Waya yakakodzera muforoma, ese marudzi ePVC pombi fittings yakashongedzwa mumadziro.
2.PPR pombi inokodzera muforoma (yemukati mekunyorera mvura system, inotonhora uye inopisa mvura)
Comprehensive mutopota muforoma Anoumba basa
Longxin muforoma inogona zvakare kupa vatengi neiyo yakazara yakazara pombi inokodzera muforoma kuumba sevhisi, uye kununura mapurojekiti kana zvigadzirwa zvinosangana nevatengi zvinodiwa mune ipfupi nguva: kubva pakubata kwePVC, CPVC, PPR nezvimwe zvigadzirwa kune iyo yekupedzisira zvigadzirwa, kana kunyange zvinhu chaizvo zvakagadzirwa ne 3D kudhinda kana yekuyedza muforoma; Kubva muforoma kuyerera kuongororwa kune dhizaini dhizaini, kuungana uye kuyedza; Kubva pakuumbwa kwepombi yakakodzera kusvika pakuendesa kwekupedzisira; Kubva pakuumbwa kwemuchina kusvika kune emahara ekutsiva zvikamu, tinogona kuwana kugutsikana kwevatengi, ndiko kukurudzira kwedu kukuru.
Kana iwe uchitsvaga akavimbika mupiki wepombi muforoma, ndapota taura nesu nekukurumidza. Nyanzvi yekutengesa timu yeLongxin mold ichaonana newe nekukurumidza sezvazvinogona.